Maitiro Ekubvisa & Kuisa tar.gz Mafaira MuUbuntu
Maitiro ekuisa tar.gz faira muUbuntu. Maitiro ekuisa yakadzingwa tar.gz muUbuntu. Raira kuisa tar.gz faira muLinux - maitiro ekubvisa nekuisa tar.gz mafaera muUbuntu.
Mukomputa, tar ikombuta software utility yekuunganidza mafaera mazhinji mune imwe faira yekuchengetedza. Iyo inowanzo taurwa se tarball uye inoshandiswa kugovera kana kuchengetedza zvinangwa. Zita reti tar rinobva ku (t) ape (ar) chive.
Mafaira ekuchengetedza dura anowanzove neefix suffix .tar, semuenzaniso, package.tar kana package.tar.bz2 kana package.tar.bz kana package.tar.xz. Izwi rekuti tarball rinoshandiswa zvakare kureva tarira faira.
Isa .tar.gz kana (.tar.bz2) Faira
Kuisa .tar.gz kana (.tar.bz2) faira iri nyore kwazvo. Vashandisi veUbuntu vanogona kubvisa iyo .tar.gz faira uye kunyora chirongwa kubva kwayakabva. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kubvisa uye kuisa tar.gz mafaera muUbuntu.
Izvo zvine hungwaru kuenda kune iyo yakadzingwa .tar.bz dhairekitori uye vhura uye uverenge iyo README faira. Inowanzo kuve nemirairo yekuisa. Kana zvisiri, unogona kuisa .tar.gz kana (.tar.bz2) faira kuburikidza neTerminal.
Dhawunirodha yaunoda .tar.gz kana (.tar.bz2) faira
Bvisa iyo .tar.gz kana (.tar.bz2) faira nemirairo inotevera
tar xvzf PACKAGENAME.tar.gz
tar xvjf PACKAGENAME.tar.bz2
Enda kune iyo yakatorwa folda uchishandisa cd rairo
Zvino mhanya unotevera kuraira kuti uise iyo tarball
Maitiro Ekubvisa & Kuisa tar.gz Mafaira MuUbuntu pakutanga akaiswa pa Kunobva Digit - Dzazvino Tekinoroji, Gadgets & Gizmos.
Chinyorwa chePPA Zvinyorwa zveUbuntu 17.04 Zesty Zapus
Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus" All Flavors Dhawunirodha Mahara
Maitiro Ekudzosera Kumusoro Iyo Thunderbird Mbiri PaLinux
Tar Vs Zip Vs Gz: Musiyano Uye Kubudirira
Waini 5.0 yakabudiswa! Heino Kuti Ungaiisa sei
Maitiro ekuisa Waini 2.0 Yakagadzika muUbuntu 16.04, 14.04, 16.10
Zvinhu zvaunofanira kuita Pakuisa Ubuntu 18.04